I-Pulse 3D: Ngaba ii-headphone ze-PS5 ezisemthethweni zikufanele? | Iindaba zeGajethi
Cinezela i-3D, ii-headphone ze-PS5 nazo zitshintshe kakhulu
Siyaqhubeka nokuhlalutya ngokunzulu izixhobo ezikhutshwe I-PS5, siyakukhumbuza Kutshanje sivavanye isikhululo sokutshaja se-DualSense, esiyifumene siyimpumelelo epheleleyo evela kwaSony. Ngeli xesha siza kuthetha ngemveliso enokwenza umahluko kwimidlalo yethu kwaye ibe lelona qabane lethu libalaseleyo.
Sivavanye ngokucokisekileyo iPulse 3D entsha, ii-headphones ezisemthethweni zePS5 ezisebenzisa zonke izakhono zesandi se3D ukuba u-Sony ubhengeze ngothando olukhulu ukusukela oko kwasungulwa i-PlayStation 5, ungaphoswa yinkcukacha enye kolu hlalutyo ngqo ngokungafakwanga ibhokisi engafakwanga bhokisi.
Njengakwezinye izihlandlo ezininzi, siluphelekisile olu hlalutyo lwevidiyo kwisitishi sethu seYouTube apho uya kuba nakho ukubona ukungabikho kwebhokisi kunye nemixholo yebhokisi, uthelekiso lwePS4 Gold yakudala kunye nokujonga okwenyani kwindlela ekungeneleleka ngayo ulawulo kwiPS5, ke lixesha elifanelekileyo lokujoyina indawo yeActualidad yeGadget ngokubhalisela kwisitishi sethu, ngokuqinisekileyo uya kufumana iividiyo ezinomdla kwaye ngendlela osishiya ngayo uthanda ukusinceda siqhubeke nokukhula kwaye sikuzisele olona hlalutyo lwe-intanethi.
Ubuthandile? Zithenge ngexabiso elifanelekileyo kule LINK.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Ukwamkela umxholo wePS5
3 Ukusebenza kunye noqwalaselo
Uyilo kunye nezixhobo: Ukwamkela umxholo wePS5
Kucacile ukuba U-Sony ukhethe i-PS5 yeethoni ezimbini kwezi Pulse 3D. Iinkcukacha ziyamangalisa kwakhona njengoko kwenzekayo ngelo xesha ngeDualSense, kwaye kungenxa yokuba ngaphakathi, nakwindawo yenkxaso, sifumana iilogo zomlawuli wePS5 kubungakanani beemilimitha.
Imat kunye neplastiki emhlophe yangaphandle, ishiya ngasemva mnyama okhazimlayo kunye nolusu olufanayo lweGolide ezazikho kwiPS4. Ngokwenxalenye yayo, ii-headphone azisakwazi ukurhoxisa njengakuzo zonke iimodeli zangaphambili, siqhubela phambili kwindlela elula kodwa elula.
Ibhanti yentloko yesibini eyolula ukuze ilingane entloko, akufuneki siyilungelelanise, kodwa baya kuyenzela yona. Kuya kufuneka ndivume ukuba iiyure zokuqala ezimbalwa zokusebenzisa zindenze ndangonwabanga, kodwa igqibela ngokuzinika ngokwazo kwaye iguqule incasa yethu ngexesha elifutshane.
Kubonakala ngathi ukuthungwa okupholileyo kukwezinye izixhobo zePS5 nazo, hayi nje isilawuli seDualSense? pic.twitter.com/HPzev8N7cP
-I-PlayStation 5 -Iindaba zePS5 zeRockock (@ PS5Updates) Novemba 10, 2020
Ukukhankanywa okhethekileyo kwi-229 gram kuphela yobunzima ikwaluncedo kuyo yonke le nto. Kucacile ukuba nabo abavakalelwa kukuba "yipremiyamu", ngakumbi xa kuthathelwa ingqalelo ixabiso, kodwa Kwakhona uSony uye wayilungisa ngokokuyila, kwaye lelo linqaku lokuba bayaqhubeka nokufumana amanqaku.
Njengazo zonke iinguqulelo zayo, ezi ntloko ze-PS5 ayizizo iBlueooth, zinesidlulisi se-USB esihambelana nePC, iMacOS kunye nePS4 ezenza ukuba zingabinazingcingo kwaye zisigcinele naluphi na uhlobo lokusikwa okanye ukunqunyulwa. Sidibanisa ngokulula i Umthumeli we-USB kwikhonsoli(Ndicebisa i-USB ngasemva) kwaye xa uvula iPulse 3D ziya kuqhagamshela ngokuzenzekelayo.
Kwinxalenye yayo, ikwanendawo yokulayisha yokulayisha I-USB-C, Ekugqibeleni sishiya ngasemva i-microUSB esisinike inkathazo engaka, kwaye Ijacket eyi-3,5mm ukuba sifuna ukuzisebenzisela enye into okanye nokuba ikude neDualSense uqobo.
Abaqhubi abangama-40mm abanefuthe le-3D
Ibhetri ayizukuba yingxaki enkosi kwezi ndlela, njengoko ingayi kubakho ngokubanzi ukuba sithathela ingqalelo ukuba isinika ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-12 zomdlalo oqhubekayo. Kwiimvavanyo zethu iziphumo ziye zangqinisiswa nokusetyenziswa okuxubileyo kwemakrofoni kunye nesandi kumthamo ophezulu esizifumene malunga neeyure ezili-10.
Thenga i-Sony Pulse 3D ngexabiso elihle kwi-AMAZON.
Phantse iyure enye iyakusithatha ukuba sibahlawulise ngezibuko le-USB lePlayStation 5 uqobo nakwimo "Yokulala". Asinasikhalazo ngokuzimela ukunyaniseka, nangona singasebenzisi iBluetooth yile nto inayo.
Ukusebenza kunye noqwalaselo
Ngokungafaniyo neGolide (uguqulelo oludlulileyo) ngoku asinasicelo sizinikeleyo, kwelinye icala esishiyiweyo, okanye iiprofayili zohlengahlengiso ezimbini. Oko kukuthi, ziya kuhlala zivakala ngokwesimo esigqitywe ngu PS5 yethu kwaye kufuneka sitsho ukuba iimvavanyo zethu ngeCall of Duty: IWarzone kunye neDemon's Soul Remake ziphumelele ngokupheleleyo.
Ngoku kufikile iqhosha le- «esweni» esivumela ukuba sisebenzise imowudi yokubonisa elubala thatha isandi sangaphandle ngeemakrofoni kwaye siyivelise kuthi, ukuze singazahluli ngokupheleleyo.
Kwiphepha lendlebe lasekhohlo onke amaqhosha, ukuqala ngevolumu, umxube phakathi kwengxoxo yeaudiyo kunye nomdlalo, amandla okucima / ukucima kunye neqhosha elitsha "lesimumu" eliza kubonisa umtya weorenji xa usebenze kwaye iya kuthi ngokucacileyo ivule iorenji ye-DualSense.
Sinazo kwezi Sony Pulse 3D dos iimakrofoni idityaniswe kuzo zombini ii-headphone, phantse ezingabonakaliyo kodwa ezibamba ngokugqibeleleyo ilizwi lethu. Kwakhona uSony ukwazile ukuyenza kakuhle kwaye sinokuviwa ngokugqibeleleyo kuzo zonke iimeko.
I-interface ye-PlayStation 5 yomsebenzisi iyakwamkela ezi ntloko nge Iimpawu eziza kuboniswa kwiscreen zisazisa ngayo yonke into esiyenzayo ngee-headphone ezinjengevolumu, ukuxuba, ukuthula kwemakrofoni ... njl. Ngokuqinisekileyo uSony uguqule amava ePS3 Pulse 5D ukuba abe ngamava apheleleyo.
Ezi Pulse 3D zisinika isandi esicocekileyo, esilungeleleneyo kwimidlalo yevidiyo kunye nesandi se-3D, nangona ingeyiyo eyona intle kwintengiso, iyimpumelelo kakhulu xa ujonga ixabiso lesixhobo. Izandi zingcono kunokuba ungalindela ngokusekwe kuyilo lwayo.
Thina, ngokokubona kwam, lelona xabiso liphezulu lomgangatho kwintengiso ngokwee-headphone ze I-PS5. Abafuni naluphi na uhlobo loqwalaselo, zidityaniswe ngokugqibeleleyo kunye nekhonsoli kunye namava ezincedisi kunye nomlawuli kunye nesikhululo sokutshaja seDualSense kunzima ukuthelekisa.
Kucacile ukuba ayisiyomveliso inexabiso eliphantsi, siya kwii-headphone eziphantse zibe li-euro ezingama-100, nangona ixabiso laso lingasothusi xa sizithelekisa nezinye iindlela zePC okanye ii-headphone zokumamela umculo. Ke ngoko, ukuba unako ukuzifikelela kwaye uza kuzisebenzisa ikakhulu kwiPS5, ndicinga ukuba zezona zilungileyo, zithenge KWI-LINK ngexabiso elifanelekileyo.
Umdibaniso opheleleyo nePS5
Umgangatho olungileyo wesandi
Uqwalaselo olulula nolulunge kakhulu
Kukho enye "ipremiyamu" engekhoyo
Ukuzimela kunokuba ngaphezulu kwelo xabiso
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Cinezela i-3D, ii-headphone ze-PS5 nazo zitshintshe kakhulu
U-Sonos utyhile ikhithi yokubuyisela ibhetri kwi-Sonos Move
IHuawei iveza i-beta esemthethweni yeHarmonyOS 2.0 yeselfowuni